ပြောင်း ဆွစ် ဖရန့် (CHF) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ပွောငျး ဆွစ် ဖရန့် (CHF)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ဆွစ် ဖရန့် (CHF) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ဆွစ် ဖရန့် ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ဆွစ် ဖရန့် ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: လစ်တန်စတိန်း, ဆွစ်ဇာလန်. ဆွစ် ဖရန့် ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: Stutz, Stei, Eier (ဆွစ်ဇာလန်), Chuffs.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဆွစ် ဖရန့် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ဆွစ် ဖရန့် ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.1ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ယူရိုEUR€0.925ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.828
ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr9.76ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.88ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč24.21ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.15ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.43ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.5ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$22.05ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$8.55ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.88ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹81.56ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.175.33ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.48ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.57ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿33.43ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥7.25ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥114.78ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1217.99ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦420.27ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽83.73ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴31.33
ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ BitcoinBTC0.00007 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ EthereumETH0.00251 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ LitecoinLTC0.0188 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ DigitalCashDASH0.0164 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ MoneroXMR0.00959 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ NxtNXT123.84 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ Ethereum ClassicETC0.219 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ DogecoinDOGE408.98 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ZCashZEC0.0192 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ BitsharesBTS60.35 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ DigiByteDGB53.09 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ RippleXRP4.48 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ BitcoinDarkBTCD3646271.95 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ PeerCoinPPC5.42 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ CraigsCoinCRAIG48208129139.29 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ BitstakeXBS0.882 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ PayCoinXPY8312.76 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ ProsperCoinPRC110249693.51 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ YbCoinYBC0.000554 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ DarkKushDANK33924239023.95 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ GiveCoinGIVE228988613411.66 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ KoboCoinKOBO142.42 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ DarkTokenDT1.02 ဆွစ် ဖရန့်CHF သို့ CETUS CoinCETI305318151215.54
500 PINK to NGN2020-11-27 11:53:20
1400 HKD to USD2020-11-27 11:49:13
1 MIO to CHF2020-11-27 11:37:47
300 USD to ZAR2020-11-27 11:27:58
300 ZAR to USD2020-11-27 11:26:16
500 GRAM to NGN2020-11-27 11:20:16
0.04 ZEC to NGN2020-11-27 11:19:48
1 USD to NGN2020-11-27 11:13:26
0.99 USD to IRR2020-11-27 11:13:19
38177.27 EUR to NGN2020-11-27 11:08:14
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 27 Nov 2020 11:55:05 +0000.